Bit By Bit - Fananganana fiaraha-miasa betsaka - Inona no vakina manaraka
Fampidirana (fizarana 5.1)
Ny fiaraha-mientana dia maneho hevitra avy amin'ny siansan'ny olom-pirenena , ny famolavolana olona , ary ny kolontsaina . Ny siansan'ny olom-pirenena dia midika hoe miditra "olom-pirenena" (izany hoe, tsy manam-pahaizana) amin'ny sehatry ny siansa; Jereo koa Crain, Cooper, and Dickinson (2014) sy Bonney et al. (2014) . Ny famokarana Crowdsourcing dia midika matetika hoe mamaha olana amin'ny fomba mahagaga ao anatin'ny fikambanana iray ary manohanana izany amin'ny vahoaka; Ho an'ny hafa, jereo ny Howe (2009) . Ny tsikera iombonana dia midika hoe vondrona tsirairay miara-miasa amin'ny fomba izay toa mahira-tsaina; Jereo ny Malone and Bernstein (2015) . Nielsen (2012) dia fampidiram-boky lava be eo amin'ny herin'ny fiaraha-miasa betsaka amin'ny fikarohana siantifika.
Misy karazana fiaraha-miasa marobe izay tsy mifanentana tsara amin'ireo sokajy telo izay natolotro azy ireo, ary heveriko fa ny telo amin'izy ireo dia mila mijery manokana satria mety ho ilaina amin'ny fikarohana ara-tsosialy. Ohatra iray amin'izany ny tsenan'ny faminaniana, izay ahitan'ny mpividy sy ny fifanarahana ara-barotra izay azo vidiana azo avy amin'ny valim-pifidianana eran-tany. Ny fampisehoana ny tsenam-barotra dia ampiasain'ny orinasa sy ny governemanta ho fampahafantarana, ary nampiasain'ireo mpikaroka ara-tsosialy ihany koa izy ireo mba haminavina ny replicability of published studies in psychology (Dreber et al. 2015) . Ho an'ny tatitra momba ny tsenan'ny faminaniana, jereo Wolfers and Zitzewitz (2004) sy Arrow et al. (2008) .
Ohatra iray hafa izay tsy mifanentana amin'ny drafitr'asan'ny fanasokajiana ny tetikasa PolyMath, izay nikarohan'ireo mpikaroka tamin'ny fampiasana bilaogy sy wiki mba hanaporofoana ny teôria matematika vaovao. Ny tetikasa PolyMath dia amin'ny fomba sasany mitovy amin'ny loka Netflix, saingy ao anatin'ity tetikasa ity dia mandray am-pahavitrihana kokoa ireo solontenan'ny hafa. Ho an'ny hafa momba ny tetikasa PolyMath, jereo ny Gowers and Nielsen (2009) , Cranshaw and Kittur (2011) , Nielsen (2012) , ary Kloumann et al. (2016) .
Ohatra iray fahatelo izay tsy mifanentana loatra amin'ny rafitra fanasokajiana ahy dia ny fanentanana miankina amin'ny fotoana toy ny Fiarovana Advantista momba ny Fandrosoana Defense (DARPA) Network Challenges (izany hoe ny Red Balloon Challenge Challenge). Ho fanampim-pahalalana bebe kokoa momba ireo fihetsiketseham- Pickard et al. (2011) jereo ny Pickard et al. (2011) , Tang et al. (2011) , ary Rutherford et al. (2013) .
Fanamarinana ataon'ny olombelona (fizarana 5.2)
Ny fehezan-teny hoe "fanisana olombelona" dia tsy hita amin'ny asa nataon'ireo mpahay siansa, ary ny fahatakarana ny zava-misy ao ambadik'ity fikarohana ity dia hanatsara ny fahaizanao mamaha olana izay mety ho azy. Ho an'ny tetikasa sasany dia matanjaka be ny ordinatera, miaraka amin'ny fahaiza-manao izay mihoatra lavitra noho ny an'ny olombelona matotra. Ohatra, amin'ny sabatra, ny ordinatera dia mety hikapoka na dia ny mpanan-karena tsara indrindra aza. Fa-ary tsy dia ankasitrahan'ireo mpahay siansa sosialy izany-ho an'ny asa hafa, ny ordinatera dia tena ratsy noho ny olona. Amin'ny teny hafa, amin'izao fotoana izao dia tsara kokoa ianao noho ny ordinatera faran'izay tsara indrindra amin'ny asa sasantsasany momba ny fanodinana sary, lahatsary, feo ary lahatsoratra. Ireo mpahay siansa momba ny ordinatera izay miasa ao anatin'ireo asa sarotra ho an'ny ordinatera ireo dia nahatsikaritra fa afaka ny hampiditra olona ao anatin'ny dingam-panatanterahany. Toy izao no nanoritsoritan'i Luis von Ahn (2005) momba ny fizotry ny olombelona raha vao namorona ny teny hoe "disadigma": "paradigm iray amin'ny fampiasana ny hery fizotran'ny olombelona hamaha ny olana izay mbola tsy mahavaha ny ordinatera." ny hevitra ankapobeny indrindra amin'ny teny, jereo ny Law and Ahn (2011) .
Araka ny voalazan'ny famaritana ao Ahn (2005) Foldit-izay nofaritako tao amin'ny fizarana mikasika ny antso an-kalamanjana-dia azo raisina ho tetik'asa fanatanterahana ny olombelona. Na dia izany aza, misafidy ny hamantatra ny Foldit ho antso misokatra satria mitaky fahaiza-manao manokana (na dia tsy voatery ho fanofanana ara-dalàna aza) ary mitaky ny vahaolana tsara indrindra, fa tsy fampiasana paikady fampiharana.
Ny dikan'ny teny hoe "split-combine" dia nampiasain'i Wickham (2011) mba hamaritana tetikady iray momba ny informatika statistika, saingy manala tanteraka ny dingana arahin'ny tetikasa fanatanterahana olombelona izany. Ny teboka sasantsasany mampihetsi-po dia mitovy amin'ny tetikasa MapReduce izay novolavolaina tao amin'ny Google; ho an'ny MapReduce, jereo ny Dean and Ghemawat (2004) ary Dean and Ghemawat (2008) . Raha te hahafantatra misimisy kokoa momba ny mari-pahaizana hafa momba ny informatika hafa dia jereo ny Vo and Silvia (2016) . Ny toko faha-3 ao amin'ny Law and Ahn (2011) dia manana fifanakalozan-kevitra momba ny tetikasa misy dingana hafa mampiavaka kokoa noho ireo ao amin'ity toko ity.
Ao amin'ny tetikasa fanatanterahan'olombelona izay noresahiko tao amin'ny toko dia nahatsikaritra izay nitranga ny mpandray anjara. Misy tetikasa hafa kosa mitady ny hisambotra "asa" izay efa nitranga (mitovy amin'ny eBird) ary tsy misy fanentanana. Jereo, ohatra, ny lalao ESP (Ahn and Dabbish 2004) sy reCAPTCHA (Ahn et al. 2008) . Na izany aza, ireo tetik'asa roa ireo dia mametraka fanontaniana etsy ambany satria ny mpandray anjara dia tsy nahalala ny fampiasana ny angon-drakitra (Zittrain 2008; Lung 2012) .
Notarihin'ny ESP Game, maro ireo mpikaroka no nanandrana nanamboatra "lalao miaraka amin'ny tanjona" (Ahn and Dabbish 2008) (izany hoe "lalao fanabeazana mifototra amin'ny olombelona" (Pe-Than, Goh, and Lee 2015) ) izay afaka ampiasaina hamaha olana maro samihafa. Ireo "lalao miaraka amin'ny tanjona" ireo dia miara-miezaka manao ny andraikitr'izy ireo amin'ny tombony ataon'ny olona. Noho izany, raha toa kosa ny ESP Game dia mizara ny rafitry ny fitambaran-tsolika mitovy amin'ny Galaxy Zoo, dia tsy mitovy amin'ny faniriana ny mpandray anjara - te-hilalao amin'ny siansa. Ho an'ny hafa amin'ny lalao miaraka amin'ny tanjona, jereo Ahn and Dabbish (2008) .
Ny fanoritsoritako ny Galaxy Zoo dia manintona an'i Nielsen (2012) , Adams (2012) , Clery (2011) , ary ny Hand (2010) , ary ny famelabelarako ny tanjona mpikaroka ny Galaxy Zoo dia voadidy. Raha mila fanazavana bebe kokoa momba ny fananganana galaxy momba ny astronomia sy ny fomba itohizan'ny Galaxy Zoo io fomba fanao io dia jereo ny Masters (2012) sy Marshall, Lintott, and Fletcher (2015) . Ny fananganana ny Galaxy Zoo, dia nahavita ny Galaxy Zoo 2 izay nanangona mihoatra ny 60 tapitrisa sarimihetsika ara-moraly kokoa avy amin'ny mpilatsaka an-tsitrapo (Masters et al. 2011) . Ankoatra izany, dia nivadika ho olana teo ivelan'ny morphologie galaxie izy ireo, anisan'izany ny fandinihana ny morondranomasina, ny fitadiavana planeta, ary ny fandikana rakitra tranainy. Amin'izao fotoana izao, ny tetikasany rehetra dia voangona ao amin'ny vohikalan'ny Zooniverse (Cox et al. 2015) . Ny iray amin'ireo tetikasa-Snapshot Serengeti-dia manome porofo fa azo atao ihany koa ny tetikasa fanoratana ny Galaxy Zoo amin'ny fikarohana momba ny tontolo iainana (Swanson et al. 2016) .
Ho an'ny mpikaroka izay mikasa ny hampiasa tsenan-tsakafo mikrotasky (oh: Amazon Mechanical Turk) ho an'ny tetikasa fanatanterahana olombelona, Chandler, Paolacci, and Mueller (2013) sy J. Wang, Ipeirotis, and Provost (2015) manome torohevitra tsara momba ny famolavolana asa sy olana hafa mifandraika amin'izany. Porter, Verdery, and Gaddis (2016) manolotra ohatra sy torohevitra mifantoka manokana amin'ny fampiasana tsenan'ny laboratoara microtask noho ny antsoin'izy ireo hoe "fampitomboana ny angona." Ny lanjan'ny fampitomboana ny angona sy ny angon-drakitra dia somary marefo. Ho fanampim-pahalalana bebe kokoa amin'ny fanangonana sy ny fampiasana labels momba ny fianarana Grimmer and Stewart (2013) amin'ny lahatsoratra dia jereo Grimmer and Stewart (2013) .
Ny mpikaroka liana amin'ny famoronana ny antsoiko hoe rafitra mpanampy amin'ny solosaina amin'ny ordinatera (ohatra: rafitra mampiasa marika famantarana ho fanofanana modely fianarana milina) mety ho liana amin'ny Shamir et al. (2014) (ho ohatra amin'ny fampiasana feo) sy Cheng and Bernstein (2015) . Ankoatra izany, ny modely fianarana milina any amin'ireny tetikasa ireny dia azo entina amin'ny antso an-kalamanjana, ka ny mpikaroka dia mifaninana amin'ny famolavolana modely amin'ny famolavolana maimaim-poana. Ohatra, ny ekipan'ny Galaxy Zoo dia nanao antso an-telefaona ary nahita fomba vaovao izay nampivoatra ilay iray namboarina tany Banerji et al. (2010) ; jereo Dieleman, Willett, and Dambre (2015) ho an'ny antsipiriany.
Antso an-kalamanjana (fizarana 5.3)
Tsy vaovao ny antso an-doha. Raha ny marina, ny iray amin'ireo antso an-tserasera malaza dia nanomboka tamin'ny taona 1714 raha namorona ny Prize maharitra ny Fanjakana Grande-Bretagne ho an'ny rehetra izay afaka mamolavola fomba iray hamaritana ny haben'ny sambo iray any an-dranomasina. Nipoitra ny maro tamin'ireo mpahay siansa lehibe indrindra tamin'izany andro izany, anisan'izany i Isaac Newton, sy ny vahaolana azo tamin'ny famoahana an'i John Harrison, mpanamory fiarandalamby avy any ambanivohitra izay nanatona ilay olana tamin'ny fomba samihafa tamin'ireo mpahay siansa izay nifantoka tamin'ny vahaolana izay mety hahitana ny astronomia ; Raha mila fanazavana fanampiny dia jereo ny Sobel (1996) . Araka ny asehon'ity ohatra ity dia misy antony iray izay heverina fa tena miasa tsara ny fiantsoana azy ireo dia manome fahafahana miditra amin'ny olona manana fomba fijery samihafa sy fahaiza-manao (Boudreau and Lakhani 2013) . Jereo ny Hong and Page (2004) sy ny Page (2008) ho an'ny tombambidin'ny fahasamihafana amin'ny famahana olana.
Ny tranga rehetra voatanisa ao amin'ny toko dia mitaky fanazavana fanampiny momba ny antony maha-ao amin'io sokajy io. Voalohany, ny fomba iray ahafahako manavaka ny fizotry ny olombelona sy ny tetikasa antso an-tariby dia ny hoe ny vokatra dia ny salan'isa vitsivitsy (famahana ny olombelona) na ny vahaolana tsara indrindra (antso misokatra). Ny loka Netflix dia somary saro-pantarina amin'io lafiny io satria ny vahaolana tsara indrindra dia tonga lafatra ny vahaolana samihafa, fomba iray antsoina hoe vahaolana amin'ny ensemble (Bell, Koren, and Volinsky 2010; Feuerverger, He, and Khatri 2012) . Avy amin'ny fomba fijerin'i Netflix, na izany aza, ny zavatra rehetra tokony hataony dia ny vahaolana tsara indrindra. Raha te hahafantatra bebe kokoa momba ny loka Netflix dia jereo ny Bennett and Lanning (2007) , Thompson (2008) , Bell, Koren, and Volinsky (2010) , ary Feuerverger, He, and Khatri (2012) .
Faharoa, amin'ny alalan'ny famaritana vitsivitsy momba ny famolavolana ny olombelona (eg Ahn (2005) ), dia tokony ho raisina ho tetik'asa fanatanterahana ny olombelona i Foldit. Na izany aza, misafidy ny hizara azy ho antso an-kalalahana aho satria mitaky fahaiza-manao manokana (na dia tsy mila fampiofanana manokana aza) ary mitaky ny vahaolana tsara indrindra, fa tsy mampiasa tetika maromaro. Raha te hahita bebe kokoa amin'ny Foldit, Cooper et al. (2010) , Khatib et al. (2011) , sy Andersen et al. (2012) ; Ny famaritako an'i Foldit dia mamoaka ny filazalazana ao Bohannon (2009) , ny Hand (2010) , ary ny Nielsen (2012) .
Farany, azo atao ny miady hevitra fa ny Peer-to-Patent dia ohatra iray amin'ny fanangonana angon-drakitra. Misafidy ny hampiditra azy io ho antso an-kalamanjana aho satria manana firafitra toy ny fifaninanana izy ary ny anjara biriky ihany no ampiasaina, fa amin'ny fanangonam-bokatra naparitaka, ny hevitra momba ny tsara sy ny fandraisana anjara dia tsy dia mazava loatra. Raha mila fanazavana fanampiny momba ny pataloha dia jereo ny Noveck (2006) , Ledford (2007) , Noveck (2009) , Bestor and Hamp (2010) .
Amin'ny fampiasana antso an-telefaona amin'ny fikarohana ara-tsosialy, dia mitovitovy amin'ny vokatry ny Glaeser et al. (2016) , dia voalaza ao amin'ny toko faha-10 ao amin'ny Mayer-Schönberger and Cukier (2013) izay ahafahan'i New York hampiasa ny famolavolana tetikasa hamokarana tombontsoa amin'ny famokarana trano fanaraha-maso. Ao New York, ireo modely mialoha ireo dia naorin'ny mpiasa an-tanàn-dehibe, saingy amin'ny tranga hafa, dia mety misy ny mieritreritra fa afaka manangana na manatsara amin'ny antso an-kalalahana izy ireo (oh: Glaeser et al. (2016) ). Na dia izany aza, ny fiahiahiana iray manan-danja amin'ny modelim-pitaovana ampiasain'ny famatsiana ny loharanom-bola dia ny fahatsapan'ireo modely ireo ny fanararaotana. Maro ny mpikaroka efa mahafantatra hoe "fako ao anaty fako", ary miaraka amin'ny modelim-pitaovana mety ho " Barocas and Selbst (2016) ". Jereo ny Barocas and Selbst (2016) sy O'Neil (2016) miaraka amin'ny angona fampiofanana.
Ny olana iray izay mety hisorohana ny governemanta amin'ny fampiasana fifaninanana mivelatra dia mitaky ny famoahana ny data izany, izay mety hitarika amin'ny fanitsakitsahana ny tsiambaratelo. Raha te hahafantatra bebe kokoa momba ny fiainana an-tserasera sy ny famoahana ireo rakitra, dia jereo ny Narayanan, Huey, and Felten (2016) ary ny adihevitra ao amin'ny toko faha-6.
Ho an'ny maro hafa momba ny fahasamihafana sy ny fitoviana eo amin'ny faminaniana sy ny fanazavana dia jereo ny Breiman (2001) , Shmueli (2010) , Watts (2014) , ary Kleinberg et al. (2015) . Mba hahalalana bebe kokoa ny anjara asan'ny faminavina ny fikarohana sosialy, jereo Athey (2017) , Cederman and Weidmann (2017) , Hofman, Sharma, and Watts (2017) , ( ??? ) , ary Yarkoni and Westfall (2017) .
Ho fanamarihana ny tetikasa fanokafana an-tsokosoko amin'ny biôlôjia, ao anatin'izany ny toro-hevitra momba ny Saez-Rodriguez et al. (2016) , jereo ny Saez-Rodriguez et al. (2016) .
Fanangonana tahirin-kevitra (fizarana 5.4)
Ny famaritako ny eBird dia mamoaka ny famaritana ao amin'ny Bhattacharjee (2005) , Robbins (2013) , sy Sullivan et al. (2014) . Raha mila fanampim-panazavana mikasika ny fomba fampiasan'ny mpikaroka ny modely statistika mba handinihana ny angon-drakitra eBird dia jereo Fink et al. (2010) ary Hurlbert and Liang (2012) . Mba hahalalana bebe kokoa ny fahaizan'ireo mpandray anjara eBird, jereo ny Kelling, Johnston, et al. (2015) . Raha te hahafantatra misimisy kokoa momba ny tantaran'ny siansa momba ny ornithologie, jereo ny Greenwood (2007) .
Ho fanampim-pahalalana bebe kokoa momba ny tetikasa Malawi Journals dia jereo ny Watkins and Swidler (2009) sy Kaler, Watkins, and Angotti (2015) . Ho fanampim- Angotti and Sennott (2015) bebe kokoa momba ny tetikasa mifandraika amin'izany any Afrika Atsimo, jereo ny Angotti and Sennott (2015) . Ho ohatra bebe kokoa amin'ny fikarohana amin'ny fampiasana angona avy amin'ny tetikasa Malawi Journals dia jereo ny Kaler (2004) sy Angotti et al. (2014) .
Ny famoronana ny anao manokana (fizarana 5.5)
Ny fomba fiasa hanolorana toro-hevitra momba ny toro-hevitra dia inductive, mifototra amin'ireo ohatra momba ny tetikasa fiaraha-miasa nahomby sy tsy nahomby izay efa reko. Misy koa ny fikarohana fikarohana momba ny fikarohana ara-tsôsialy ara-tsosialy marobe amin'ny famolavolana vondrom-piarahamonina an-tserasera izay manan-danja amin'ny famolavolana tetikasa fiaraha-miasa betsaka, jereo ohatra, Kraut et al. (2012) .
Raha mikasika ireo mpandray anjara mandrisika dia tena sarotra tokoa ny mamantatra ny antony mahatonga ny olona handray anjara amin'ny tetikasa fiaraha-miasa amin'ny ankapobeny (Cooper et al. 2010; Nov, Arazy, and Anderson 2011; Tuite et al. 2011; Raddick et al. 2013; Preist, Massung, and Coyle 2014) . Raha mikasa ny handrisika ny mpandray anjara amin'ny sandany amin'ny tsenan'ny asa raitra (toy ny Amazon Mechanical Turk), Kittur et al. (2013) manome torohevitra vitsivitsy.
Raha mahagaga ny fahagagana, jereo ohatra maromaro momba ny zava-baovao tsy ampoizina avy amin'ny tetikasa Zooiverse, jereo Marshall, Lintott, and Fletcher (2015) .
Momba ny maha-etika azy dia misy ny teny fampidiran-draharaham-peo maromaro momba ireo olana tafiditra amin'izany: Gilbert (2015) , Salehi et al. (2015) , Schmidt (2013) , Williamson (2016) , Resnik, Elliott, and Miller (2015) , ary Zittrain (2008) . Ho an'ny olana mifandraika amin'ny olana ara-pitsarana amin'ny mpiasa mpiasa, jereo ny Felstiner (2011) . O'Connor (2013) dia mametraka fanontaniana momba ny fikarakarana ny fikarohana ara-tsosialy rehefa mibaribary ny anjara asan'ny mpikaroka sy ny mpandray anjara. Ho an'ny lohahevitra mifandraika amin'ny fizarana angon-drakitra sady miaro ny mpandray anjara amin'ny tetikasa siantifika siantifika, jereo Bowser et al. (2014) . Samy manana adihevitra momba ny olana etika amin'ny fizarana angon-drakitra ny Purdam (2014) sy ny Windt and Humphreys (2016) . Farany, ny ankamaroan'ny tetikasa dia manaiky ny fandraisan'anjara nefa tsy manome fahazoan-dàlana ahatongavana amin'ireo mpandray anjara. Ao amin'ny Foldit, matetika ireo mpilalao dia voasoratra ho mpanoratra (Cooper et al. 2010; Khatib et al. 2011) . Amin'ny tetikasa fanokafana hafa, ny mpilatsaka an-tsitrapo dia afaka manoratra taratasy iray mamaritra ny vahaolana ( Bell, Koren, and Volinsky (2010) sy Dieleman, Willett, and Dambre (2015) ).